Virtualbox: Fantaro amin'ny fomba feno ny fampiasana an'ity rindranasa ity | Avy amin'ny Linux
Amin'ity lahatsoratra ity dia tsy hiresaka momba ny inona ny Virtualbox? Ahoana ny fametrahana Virtualbox? ary Inona no averin'ny Virtualbox?, hatramin'ny vao haingana tao amin'ny Blog dia niresaka momba ireto zavatra ireto izahay tao amin'ireo fanontana teo aloha sy farany: "Mametraka VirtualBox amin'ny Ubuntu 18.04 LTS sy ny derivatives" y «Ny kinova vaovao an'ny VirtualBox 6.0 miaraka amin'ny fanatsarana vaovao dia efa navoaka».
Amin'ity famoahana ity dia hamaly fohifohy ny "torohevitra" vitsivitsy sy ny "toro-hevitra mahasoa" izahay mba hampiasa amin'ny fomba mahomby sy mahomby kokoa ity fitaovana Operating Systems Virtualization ityIzany hoe, afaka mahafehy tanteraka ny fampiasana VirtualBox izy ireo, ary manapa-kevitra ny hampiasa azy io ho toy ny fitaovana ilaina kalitao premium ho an'ny asa an-tranony na orinasa OS Virtualization
2 Rafitra tena izy
3 Torohevitra sy torohevitra mahasoa
3.1 Fizarana ankapobeny
3.2 Fizarana rafitra
3.3 Fizarana fizarana
3.4 Fizarana fitahirizana
3.5 Fizarana Audio
3.6 Fizarana tambajotra
3.7 Serial Seranana Seranana
3.8 Fizarana USB
3.9 Fizarana Folders nozaraina
3.10 Fizarana Interface an'ny mpampiasa
Tadidio fa VirtualBox dia Hypervisor 2 multiplatform Hypervisor, izany hoe, tsy maintsy ary azo atao (apetraka) fotsiny amin'ny Host (Computer) misy ny kinova Windows, Linux, Macintosh, Solaris, OpenSolaris, OS / 2 ary OpenBSD.
Ary izany dia manana tsingerin'ny fampandrosoana mitohy sy mandroso miaraka amina famoahana matetika, izay mahatonga azy io ho safidy tsara hafa ho an'ny vahaolana hafa mitovy amin'izany, saingy miaraka amina endri-javatra sy fiasa maro be, rafitra fandefasana vahiny sy sehatra ahafahany mihazakazaka.
Rafitra tena izy
Amin'izao fotoana izao ny Virtualbox ao amin'ny kinova misy azy, 6.0, dia manana ireto fizarana manaraka ireto sy ny safidiny ao amin'ny menio fisehon-tserasera:
Ity fizarana ao amin'ny Menu ity dia mifantoka saika ny lafin-javatra rehetra amin'ny fampiharana izay mitantana saika ny asa lehibe rehetra an'ny fampiharana, toy ny: Ny làlana fitehirizana (Default Folders) an'ireo rakitra lojika VM ampiasaina amin'ny "VRDP Authentication Library" ampiasain'ny VirtualBox hananana ny fahaizana ho tonga "RDP Server".
Ho fanampin'ny fanamboarana ny hitsin-dàlana fitendry hahomby amin'ny fampiasana azy amin'ny alàlan'ny kitendry, fandefasana ny vanim-potoana fanavaozam-baovao sy ny endrik'izany, mamaritra ny fitenin'ny interface interface na ny endrik'izany (ny habeny sy ny fisehony) eo amin'ny monitor (s ), ankoatry ny maro hafa. Eto izay voalamina dia mety ho an'ny fampiharana amin'ny ankapobeny, ary ho an'ny VM manokana.
Ireto ny safidy voaangona eto:
Préférences (ankapobeny / fidirana / fanavaozana / fiteny / fampisehoana / tamba-jotra / fanitarana / proxy)
Manafatra Serivisy virtoaly
Alefaso ny serivisy virtoaly
Administratera an'ny: Virtual Media / Host Network / Cloud Profiles / Network Operations / Updates
Avereno ny fampitandremana rehetra
Ity fizarana ao amin'ny Menu ity dia mifandraika amin'ny zavatra rehetra mifandraika amin'ny famoronana na fitantanana VM tantanana. Ireto ny zana-kazo ananany dia ireto manaraka ireto:
Mamorona milina virtoaly vaovao
Ampio milina virtoaly efa misy
Ity fizarana ao amin'ny Menu ity dia manome fidirana amin'ny fampahalalana rehetra, antontan-taratasy ary ny fanohanan'ny fampiharana. Ny safidy azo idirana dia zaraina ho ireto manaraka ireto:
Votoatin'ny Menu an'ny mpampiasa eo an-toerana
Tsidiho ny tranonkala ofisialy
Zahao ny fizarana Bugtracker ao amin'ny tranonkala ofisialy
Ampidiro ny forum ofisialin'ny tranonkala
Asehoy ny Window «About Virtualbox»
Torohevitra sy torohevitra mahasoa
Ireto toro-hevitra sy toro-hevitra manaraka ireto izay ho tanterahina amin'ny VirtualBox dia tsy misy afa-tsy andiana tolo-kevitra amin'ny toe-javatra natokana ho an'ny tena manokana izay azon'ny tsirairay atao amin'ny MV-ny avy amin'ny alàlan'ny fizarana "File / Prefers" izay hita ao amin'ny boaty menu. Ka ireo fanitsiana ireo dia azo arahana amin'ny taratasy na ampifanarahana amin'ny filan'ny mpiasa, ekipa na fikambanana.
Amin'ity fizarana ity dia manana takelaka 4 izahay ahafahanao manao ireto hetsika manaraka ireto:
Fototra: Ovao ny anaran'ny VM, ny karazana OS sy ny dikanteny.
Mandroso: Safidio ny fampirimana ahatongavana ho an'ny sarin-tsary izay tahirizinay avy amin'ny VM.
famaritana: Arindra, soraty ny antsipiriany ary ny famaritana momba ny fampiasana na zavatra tokony hatao ao amin'ny VM tsirairay avy.
Encryption kapila: Alefaso ny fanafenana ny rakitra Virtual Hard Drive an'ny VM.
Ao amin'ity fizarana ity ny tolo-kevitra dia: Alefaso na tsia, ny fampiasana araka ny tokony ho izy ny clipboard sy ny encryption.
Amin'ity fizarana ity dia manana takelaka 3 izahay ahafahanao manao ireto hetsika manaraka ireto:
Takelaka fototra: Amboary ny fitadidy fototra, izany hoe ny RAM izay tianay omena ny MV, ankoatry ny zavatra hafa.
processeur: Mampiasà teknolojia virtualization tena marina na mahomby kokoa ho an'ny core CPU, ankoatry ny zavatra hafa.
Fanafainganana: Safidio ny karazana interface interface misy sary, ary avelao ny safidy manafaingana na tsia.
Ao amin'ity fizarana ity ny tolo-kevitra dia: Misafidiana kely kokoa noho ny habetsaky ny RAM / CPU Cores ilaina na kajy raha ilaina mba hisorohana ny hatsiaka na ny fihemorana ao amin'ny VM, ary aleonao hitazona ny PAE / NX sy VT-x / AMD-V ho afaka amin'ny VM izay maka tahaka ny solosaina maoderina.
Display: Amboary ny habetsaky ny fahatsiarovana horonan-tsary.
Efijery lavitra: Alefaso ny safidin'ny fifandraisana lavitra amin'ny VM.
Lahatsary: Alefaso ny safidy fakana horonantsary amin'ny MV.
Ao amin'ity fizarana ity ny tolo-kevitra dia: Alaharo araka izay azo atao ny Memory Video ary tazomy ny 3D Acceleration mba hitazomana ny fahombiazan'ny VM tena tsara.
Mitantana ireo loharanom-bola fitehirizana VM sy mitantana kapila kapila optika virtoaly.
Ao amin'ity fizarana ity ny tolo-kevitra dia: Atokàny ny habaka lojika avo indrindra (GB) ho an'ny Disks Virtoaly izay noforonina tsara kokoa tamin'ny endrika "habe nomen'ny Dynamically" fa tsy "habe raikitra" hitazonana ny fahombiazana tena tsara sy ny efitrano fitomboana tsara ao amin'ny VM.
Hanamboarana ny fampidirana am-peo sy ny fivoahan'ny MV.
Ao amin'ity fizarana ity dia tsy misy tolo-kevitra: manokana na manokana momba izany.
Hanamboarana ny tambajotran'ny VM.
Izy io dia manana safidy lehibe 2 hanamboarana. Ny antso voalohany «Connected» izay mampiseho ireto safidy manaraka ireto hisafidianana sy hampiasana azy: Tsy mifandray, Nat, Network NAT, Bridge Adapter, Network internal, Host Only Adapter, ary Generic Controller. Ary ny antso faharoa «Advanced» dia afaka manamboatra amin'ny fomba hafa isika, ireto masontsivana manaraka ireto dia: Adapter Type, Mode promiscuous, MAC Address, and Connected Cable.
Ao amin'ity fizarana ity ny tolo-kevitra dia: Safidio ny fampifangaroana masontsivana mifanaraka amin'ny "Connected" sy "Advanced" hisorohana ny fifandraisana ratsy sy ny tsy fahombiazan'ny filaminana tsy ilaina.
Serial Seranana Seranana
Hanamboarana ny Serial Port Cards an'ny MV.
To configure the Devices in the USB Ports of the VM.
Fizarana Folders nozaraina
Mba hampifanarahana ny Folders nozaraina ao anatin'ny VM.
Ao amin'ity fizarana ity ny tolo-kevitra dia: Apetraho araka izay azo atao ny Folder Shared izay manondro ny tena Computer (Host Host) hanamorana ny fifanakalozana / fiarovana ny angona eo amin'izy ireo.
Fizarana Interface an'ny mpampiasa
Mba hampifanarahana ny atiny sy ny fampisehoana ny bara Menu Virtualbox isaky ny MV.
Virtualbox dia rindrambaiko be mpampiasa noho ny fisakaizany am-pitiavana, fametrahana tsotra sy fiasa lehibe. Na izany aza, toy ny haitao miasa rehetra Virtualization Systems, dia misy safidy, endri-javatra ary fampiasa maro tsy maintsy ianarana hifehezana. Noho izany, manantena izahay fa ity lahatsoratra ity dia hanampy anao hameno sy hanamafy ny fahalalana efa misy momba ny Virtualbox.
Raha manana fanontaniana bebe kokoa momba an'ity lohahevitra ity ianao dia mamporisika anao aho hamaky ny taratasy fiasa mifandraika amin'izany hita ao rohy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Virtualbox: Fantaro amin'ny fomba lalina ny fomba fampiasana an'ity fampiharana ity
saletpv dia hoy izy:
Te hahafantatra aho raha afaka mampiasa azy amin'ny tranokalako http://ventatpv.com
Mamaly an'i ventatpv
Raha te hilaza ianao fa raha afaka mametraka an'io tranonkala io amin'ny Web Server virtoaly misy VirtualBox, dia mazava ho azy fa manao ianao… Tena mety ho isan-jato tsara amin'ny tranonkala no mandeha amin'ny MV.
Spygate: mandeha hatrany i Linspire ...
Gnome 3.32 dia hanana lohahevitra nohavaozina, tonga ny volana febambra